Mpifaninana hafa amin'ny Apple Watch? Halfbeak, no filohan'ny HTC sy Under Armor | Avy amin'ny mac aho
Mpifaninana hafa amin'ny Apple Watch? Halfbeak, no filohan'ny HTC sy Under Armor
Isika dia amin'ny fotoana toa toa ny famantaranandro marani-tsaina dia mety hanana andraikitra lehibe amin'ny tsena mbola tsy nividy ireo fitaovana ireo araka ny nandrasana. Roa taona lasa izay, ny vinavinan'ireto fitaovana ireto dia nahavariana tokoa ary ny mpandalina rehetra dia naminavina fahombiazana lehibe ho an'ny fitafiana, zavatra izay orinasa vitsivitsy monja no nahavita nahavita ary mino izahay fa Apple (na dia tsy mampiseho tarehimarika ofisialy aza) dia iray amin'ny miaraka amin'ny Apple Watch anao izy ireo. Na izany na tsy izany, miely tampoka indray ny tsaho momba ny famoahana ireo famantaranandro marani-tsaina ho amin'ity taona 2017 ity sy ny haino aman-jery manampahaizana manokana mba hampiseho sary sy antontam-baovao tafaporitsaka momba azy ireo, amin'ity tranga ity izay eto ambony latabatra dia ny Saripika tafaporitsaka an'ny smartwatch noforonina sy noforonin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny HTC sy Under Armor.
Ny Smartwatch Halfbeak dia tafaporitsaka tao amin'ny tambajotra sosialy sinoa Weibo ary antenaina hanana endrika tsara sy famaritana anatiny tsara vonona hiatrika ireo fitaovana izay havoaka amin'ny fotoana iray na amin'ity taona ity. Amin'ity tranga ity, ny Halfbeak dia manampy efijery misy vahaolana 360 × 360, manana tranga vy izy, ny logo HTC sy Under Armor ao aorinan'ny, sensor ho an'ny fo ary mandritra ny fotoana Android Wear 1.3, fa Antenaina fa hahazo ilay kinova Android Wear 2.0 vaovao heverina fa amin'ny 9 febroary izay rehefa honohono dia mety hahatratra ireo akanjo anaovina ireo
Toa tsy mampino fa ilay iray lavo amin'ny HTC dia manohy miady ny hifoha ary ity dia zavatra tena manamafy ny marika amin'ny finiavana hamorona fitaovana vaovao, saingy mampidi-doza ity tetikasa ity na eo aza ny zava-drehetra, satria i Apple mihitsy, i Samsung na i LG aza , dia miorina eo amin'ity tsena ity ho an'ny famantaranandro marani-tsaina ary ho sarotra ny hanana toerana ao. Ho fanampin'izany LG dia manana tetik'asa famantaranandro roa miaraka amin'i Google hiady amin'ny Apple Watch ary izany dia haseho tsy ho ela, antenaina ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona izay hatao amin'ity volana ho avy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Mpifaninana hafa amin'ny Apple Watch? Halfbeak, no filohan'ny HTC sy Under Armor
macOS Sierra 10.12.4 beta 1 dia misy ho an'ny mpamorona ankehitriny
Misokatra izao ny Apple Store vonjimaika amin'ny lalam-pirenena faha-5